जागिर होइन व्यापारबाट मालामाल, एमएको सर्टिफिकेट थन्क्याएर जुसको व्यापार, महिनाकै लाख कमार्इ :: BIZMANDU
जागिर होइन व्यापारबाट मालामाल, एमएको सर्टिफिकेट थन्क्याएर जुसको व्यापार, महिनाकै लाख कमार्इ
प्रकाशित मिति: Dec 16, 2017 3:43 PM
काठमाडौं। नेपालमा सबैभन्दा धेरै कमाउनेहरुले तलब कति थाप्छन्?
तर, सुरेन्द्रको घ्युकुमारीको जस्तो क्रेज अरुको छैन्। घ्युकुमारी जुस पिउन लाइनमा हुन्छन भने अरुमा फाट्टफुट्ट।
मन्दिर नजिकै छ कोटेश्वर बहुमुखि क्याम्पस। क्याम्पसका शिक्षक र विद्यार्थीहरु पनि उनका ग्राहक हुन्। क्याम्पसका विद्यार्थी 'फ्रि टाइम'मा त्यहाँ झुम्मिन्छन्।
जुस पिउँछन् र ‘एलोभेरा दाइ’ भन्दै बिदा हुन्छन्। कलेजका विद्यार्थीका उनी प्रिय ‘एलोभेरा दाइ’ भइसकेका छन्।सुरेन्द्रले महादेवस्थान मन्दिरको दृश्यमात्र फेरेका छैनन्। आफ्नो जीवनको दृश्य नै फेरेका छन्। कुनै समय जागिर खान भौतारिएका उनी अहिले घ्युकुमारीको जुस बेचेर मासिक एक लाख भन्दा बढी कमाउँछन्।
मास्टर्सको परीक्षा सकेपछि सुरेन्द्र दोधारमा थिए। के गर्ने कसो गर्ने भेउ पाएका थिएनन्। जागिर खान धेरै ठाउँमा वैयक्ति विवरण बुझाए पनि। धेरै ठाँउमा भौतारिए।
तर, भनेजस्तो जागिर कतै पाएनन्। कतै काम गरेको अनुभव खोज्थ्यो। कतै तलब र सेवा सुविधामा चित्त बुझ्दैन थियो। थोरै तलब दिने शर्तमा उपत्यका बाहिर काम नपाएका होइनन्। उनलाई कतै चित्त बुझेन। जागिर खाने इच्छा त्यागिदिए।
घ्युकुमारीको पात भएपछि यति सामानले जुस तयार हुन्छ। जुस तीतो हुने भएकाले बिरेनुन चाहिन्छ।दैनिक कम्तिमा सय गिलासभन्दा बढी जुस बेच्ने उनी एक गिलास जुसको २० रुपैया लिन्छन्।
यति सामानको लागि मासिक ३० हजार खर्च गर्यो भने पर्याप्त हुन्छ। आफ्नो परिवारको सबै खर्च पुर्याएर मासिक १ लाख बचाउँछ उनी। ‘बिहानको ३ घण्टा काम गर्दा पुग्छ। दिनभरि अरु काम नहुनाले घरमा बस्दा दिक्क लागेकाले जागिर खान्छु। अरु काम छोडे पनि जुस बेच्न चाहिँ छोड्दिन,’ भन्छन्, ‘पढेलेखेको मानिसहरु सबैले जागिर खानुपर्छ भन्ने छैन्। विदेश नै जानु पर्दैन। पढेको मानिसले यस्तो काम गर्दा सर्टिफिकेटमा योग्यता पनि घट्दैन्।’
जागिर होइन व्यापारबाट मालामाल, एमएको सर्टिफिकेट थन्क्याएर जुसको व्यापार, महिनाकै लाख कमार्इ को लागी १ प्रतिक्रिया(हरु)
Bidhan Khanal[ 2017-12-16 05:55:52 ]
तिमल्सिना हरु त फेमस नै छन नयाँ नयाँ काम गरी ब्यापार प्रबर्धन का लागि,
उद्धव तिमल्सिना भने पनि, सिताराम तिमल्सिन भनेपनी,
मासिक तलब, ब्यापार भन्दा माथि शिक्षा को कुरा गर्नु पर्दा,
यी सुरेन्द्र भाई, एक दिन उद्धव वा सिताराम भन्दा माथिल्लो तिमल्सिना हुनेछन है,
विश्वाश भया !!!